Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Guddi Usaaray Xubnaha Guddiga doorashada | Gaaroodi News
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Guddi Usaaray Xubnaha Guddiga doorashada
Ra’iisul Wasaare Rooble oo guddi u saaray xubnaha guddiga doorashada
Ra’iisul Wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddi heer wasiirro ah u saaray xaqiijinta xubnaha maamulka guddiga doorashada ee labada heer ee ay cabashadu ka taagan tahay.
Arrintan ayaa qeyb ka ahayd heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Tubta xallinta khilaafka Guddiyada maamulka doorashooyinka :
Golalaha Wadatashiga Qaran ayaa go’aamiyey, iyadoo la tixraacayo soo jeedintii Guddiga Farsamada Baydhabo, in Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka loo soo gudbiyo xubnaha Guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood ah si loo badalo. Wakhtigu wuxuu ka bilaabanayaa markii ay Madaxda Golaha Wadatashiga Qaranku saxiixaan heshiiskaan.
Guddiyadu waxay iska dhex dooranayaan guddoonkooda kadib markii ay soo dhameystirmaan